यसरी बोल्न बाध्य भए ३ वर्षसम्म पानी बराबार भएका पूजा र प्रदीप ! के गर्दै छन् एकसाथ फिल्म ? – mero sathi tv
यसरी बोल्न बाध्य भए ३ वर्षसम्म पानी बराबार भएका पूजा र प्रदीप ! के गर्दै छन् एकसाथ फिल्म ?
On १८ चैत्र २०७४, आईतवार १२:३२
२०७२ सालमा रिलिज भएको चलचित्र ‘प्रेमगीत’बाट नायक प्रदीप खड्का र नायिका पूजा शर्माको निकै चर्चा भयो । जुन चलचित्रबाट नायक प्रदिप खड्का उदाए, त्यस्तै निरन्तर फ्लप फिल्म दिरहेकी नायिका पूजा शर्मा पनि स्टार भईन्, दुई जनाको जोडीलाई दर्शकले एकदमै रुचाए।
पानी बाराबारको सम्बन्धमा रहेका प्रदीप र पूजाको भेटले यति बेला सिनेबृतमा तंरग पैदा गरेको छ । एकअर्काको मुख हेर्न सम्म नरुचाउने यी दुईको बुधवार पुतलीसडक स्थित स्टार मलमा जम्काभेट भयो । लिलीबिली प्रमोसनको लागी अन्तवार्ता दिइरहेका प्रदिप र रामकहानीको सुटिङबाट फर्किएकी पूजाको भेट भएसँगै एकै छिन् कोही बोलेनन् । जब पूजाले त्यहाँ प्रदिप र जसितालाई अन्तवार्ता दिईरहेको देखिन,उनि बाहिर निस्किन र तल आएर बसिन।पछि प्रदिप आफै पूजासँग हास्दै केछ भनि बोले ।
प्रदिपले पूजालाई किन बाहिर आएको भनेर प्रश्न गरे, जवाफमा पूजाले अन्तवार्ता भइरहेकाले डिस्टर्ब होला भनेर भनिन्, त्यसपछि प्रदिपले तर हुदैनथ्यो भनि जवाफ फर्काए । दुबैजनाले एक साथ तस्बिर पनि खिचाए । हाल प्रदीप चलचित्र ‘लिलीबिली’को प्रमोसनमा छन् भने पूजा नयाँ चलचित्र ‘रामकहानी’को सुटिङमा व्यस्त छिन् ।
‘प्रेमगीत’ पछि प्रदीप र पूजाको जोडीलाई दर्शकले निकै रुचाए । यी दुईलाई एकसाथ चलचित्रमा हेर्न चाहने धेरै छन् । सँगै चलचित्र खेल्ने सम्भावना कति छ ? भनेर प्रदिपलाई सोधिएको प्रश्नमा उनी भन्छन् ‘हामी बिच केही त्यस्तै नराम्रो सम्बन्ध छैन । यदि कोही हामीलाई चलचित्र खेलाउन चाहनु हुन्छ र राम्रो कथा ल्याउनु हुन्छ भने मेरो तर्फबाट कहिले नाइँ जवाफ आउदैन् ।